Maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Rooble ee Farmaajo uu ku amaanay caawa? - Caasimada Online
Home Warar Maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Rooble ee Farmaajo uu ku amaanay...
Maxay tahay tallaabada ay qaaday xukuumadda Rooble ee Farmaajo uu ku amaanay caawa?
Muqdisho (Caasimada Online) –Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa caawa madaxtooyada ku qaabilay xubno ka tirsan golaha wasiirrada Soomaaliya iyo maamulaha shirkadii maanta dalka Itoobiya u dhoofisay Kalluunka, kadib markii uu dhacay heshiis ay dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya isku dhaafsanayaan Kalluunka iyo Qaadka.
Farmaajo waxa uu soo dhaweeyey heshiiskaas, isagoo xukuumadda ku amaanay waxa uu ugu yeeray, “awood-siinta ganacsatada Soomaaliyeed iyo xaqiijinta suuqyo heer gobol ah oo loo iib geeyo waxsoosaarka dalkeenna ay kor uqaadeyso dhaqaalaha dalka, fursadaha shaqaaleysiinta dhallinyarada iyo heer nololeedka shacabkeenna.”
Hoos ka akhriso war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska Farmaajo